တစ်ဦးကတောင်တန်းစက်ဘီးစီးလမ်းညွှန်ဝယ်ယူ - သတင်း Rule
အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်သငျသညျသစ်တစ်ခုတောငျကိုစက်ဘီးပေါ်သုံးဖြုန်းနိုင်ငွေဘယ်လောက်မှအဖြစ်တကယ်ရှိပါတယ်. သငျသညျထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်စောင့်ရှောက်ကူညီရ, သင်သည်သင်၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးသည်အဘယ်သို့ထွက်တွက်ဆနှင့်မည်မျှအသစ်တစ်ခုကိုစက်ဘီးများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့သင့်ဆန္ဒရှိသင့်တယ်.
သငျသညျကိုဝယ်တဲ့အခါမှာ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Wal-Mart အဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကုန်သည်စတိုးဆိုင်မှမဝယ်သင့်တယ်. သငျသညျအစားသင်၏ဒေသခံဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကိုထောကျပံ့နှင့်တစ်ဦးအများကြီးပိုကောင်းဆိုင်ကယ်နှင့်ပိုကောင်းတာဝန်ဆောင်မှုရသင့်တယ်.
အားလုံးတောင်ကြီးတောင်စက်ဘီးစိတျထဲမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစီးနင်းစတိုင်များနှင့်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးအစားများနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်. သင်အများဆုံးလုပ်နေပါလိမ့်မည်စီးနင်းအမျိုးအစားထွက်တွက်ဆဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. ချောချောမွေ့မွေ့စီးနင်း, လက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်ပြိုင်ကား, တောငျပျေါ Cruise, သို့မဟုတ်ကုန်းဆင်းတွင်ဝင်ရောက်ဓာတ်လှေကားသငျသညျအထဲကတွက်ဆဖို့လိုပါတယ်အရာတစ်ခုခုသည်. သငျသညျကို select လုပ်ပါဆိုင်ကယ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်ကိုက်ညီသောသေချာပါစေနှင့်မရောင်းမယ့်ဝန်ထမ်း.
သင်ကမတတ်နိုင်နိုင်လျှင်, အပြည့်အဝရပ်ဆိုင်းမှုတောင်ကြီးတောင်စက်ဘီးအမြဲဝယ်ယူရကျိုးနပ်သည်. တစ်ဦးကခဲယဉ်းအမြီး, နောက်ဘက်ရပ်ဆိုင်းမှုမရှိဘဲ, ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အများကြီးပေါ့ပါးအလေးချိန်နှင့်နင်းဖြစ်ပါသည်, အပြည့်အဝဆိုင်းငံ့ခံရပိုပြီးသက်သာခြင်းနှင့်ယေဘုယျပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုကိုပူဇော်ပေမဲ့. သင်သည်သင်၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးပေါ်တွင်အခြေခံကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေလိုပါလိမ့်မယ်, စီးနင်းစတိုင်, နှင့်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးအစားကိုသင်အများဆုံးအပေါ်စီးပါလိမ့်မယ်.
စိတျအပိုငျးမှတောင်ကြီးတောင်စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းနှိုငျးယှဉျနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး, ရရှိနိုင်ဝေးလွန်းအများအပြားပေါင်းစပ်ရှိပါတယ်အဖြစ်. ဤသို့ပြု ပတ်သက်. သွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသငျသညျမှအရေးပါဆုံးဖြစ်ကြောင်းအနည်းငယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေတာနဲ့အရာကြွင်းလေသို့မဟုတ်အနိမ့်ဆုံးသင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းလဲကျတာသေချာပါစေ. သငျသညျဘီးနှင့်နောက် derailleur မှာကြည့်ရှုပြီးတော့အမဲချိတ်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်.
ယခုနှစ်အတွင်းတွင်, တောင်ကြီးတောင်စက်ဘီး၏စျေးနှုန်းများကိုအတော်လေးနည်းနည်းသာအတက်အကျနိုင်. နွေရာသီမှတဆင့်နွေဦးကိုအဓိကဝယ်ရာသီဖြစ်ပါသည်. လက်ျာစျေးနှုန်းပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်သင်စောင့်ဆိုင်းနိုင်လျှင်, ပုံမှန်အားဖြင့်ကျဆုံးနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်, သင်တစ်ဦးစုံတွဲတရာဒေါ်လာကိုကယျတငျနိုငျ. သင်သည်ထိုသူတို့ထံမှမဝယ်လျှင်အများစုကဆိုင်ကယ်ဆိုင်များလည်းဈေးလျှော့သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆက်ကပ်လိမ့်မည်.
ကောင်းတစ်ဦးဆိုင်ကယ်ပွဲစားရှာဖွေခြင်းကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရှာဖွေတာထက်ပိုအရေးကြီးတယ်. သငျသညျအစဉ်အမြဲသင်တစ်ဦးမြင့်မားစျေးနှုန်းတစ်ရောင်းချနေခြင်းထက်သင်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဆိုင်ကယ်ရောင်းချနေအကြောင်းပိုမိုဂရုစိုကျတယျတဲ့ကုန်သည်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်. တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောကုန်သည်တစ်ဦးသည်စင်ကြယ်ပြုပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသည်နှင့်သင်တကယ်သူတို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားနိုငျသောအထင်အမြင်အားငါပေးမည်.
သငျသညျအခြို့သောစက်ဘီးညာဘက်ခံစားရလိမ့်မည်ဟုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အခြားသူများကိုမစဉ်. သငျသညျ drive ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည် ပို. စက်ဘီး, သင်ပိုကောင်းသငျသညျမဘာလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အဘယ်သို့နားလည်ပါလိမ့်မယ်.
ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်စက်ဘီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတောင်စက်ဘီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ယေဘုယျစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်. သငျသညျအစဉ်အမြဲသင်နောက်ဆုံးဝယ်ယူပါစေရှေ့တော်၌ဆိုင်ကယ်ကိုစဉ်းစားအခွားအဘယျပိုင်ရှင်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များမှာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်.
အကယ်. သင်သည် Windows Run နိုင်သ 95 သင့်ရဲ့ Browser ကိုအတွင်းပိုင်းအခုတော့
ပဲရစ်ဟီလ်တန်လိင်တိပ် Co. , ပြီးနောက်ရေဒီယိုဒီဂျေအထဲကကျိန်ဆဲ ...
14716	0 စက်ဘီး, စက်ဘီး, Derailleur ဂီယာ, ရွေးကောက်ပွဲခရိုင် (ကနေဒါ), တောင်ကြီးတောင်ဆိုင်ကယ်, တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်း, အားကစားဆိုင်ရာ, Walmart
← တစ်ခုမှာ Pack ကိုအတွက်တွေ့ဆုံဂျက်စဲလ်တယ်ရီယာတစ်ဦးကခွေး ထိုးကွင်းထိုး – သင့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကဒီဇိုင်းကောက်နေ →